Air Force One wuxuu ku socdaa mid sarreysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Air Force One wuxuu ku socdaa mid sarreysa
Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Waxaa sameeyay Exosonic, mashruucan waxaa ka mid ah qolal raaxo leh iyo teknolojiyad u saamaxaysa inay ka dul duuli karto meelaha dhisan
Concord waxay ka baxday adeegga 2003
Mareykanku wuxuu ka fekerayaa mar kale inuu u boodboodo: Cirka Sare ee Cirka
Air Force One wuxuu dammaanad qaadayaa masaafo dhan shan kun oo mayl badeed ama 9,260 kiilomitir
Ku soo noqoshada 1970s waxay qaadatay seddex saacadood oo kaliya in laga soo qaado London ilaa New York. Waxay qaadataa sideed saacadood maanta. Ku soo noqoshada 70-meeyadii waxaa suurta galisay diyaarada weyn, diyaarada kaliya ee ganacsi ee reer galbeedka ah ee dhaaftay codka maqalka - Concorde Soofiyeedka sidoo kale wuxuu lahaa diyaarad rakaab oo aad u weyn oo Tupolev Tu-144 ah, oo si haboon loogu naaneeso Concordski.
Shirkada 'Concord' ayaa shaqadii ka baxday 2003dii (Soofiyeeti / Ruush Tu-144 - 1998) .. Laakiin hadda Mareykanku wuxuu ka fikirayaa horusocod kale: hawada sare ee loo yaqaan 'super Force'.
Khubarada duulimaadyada Mareykanka waxay filayaan matoorada mataanaha ah ee Air Force One oo aad u sarreysa inay keenaan xawaaraha ugu badan ee Mach1.8, oo qiyaas ahaan labanlaaban kuwa hadda jira ee ganacsiga. Waxaa jira hadal haynta qiyaastii 2,200 km / h laakiin sheeko cusub ayaa ah "kor u kaca".
Thanks to fuselage dheeraad ah oo dheereeya iyo astaamo badan oo naqshad kacaan, fikradda Exosonic waxay yareysaa sawaxanka guuxa caadiga ah ee diyaaradahan markay duulayaan dhul ballaaran iyo dhammaan xarumaha la deggan yahay. Sidaa darteed xaddidaadda weyn ee duulimaadyada sarreysa ee ku qasbay in ay dul maraan badda waa la baabi'inayaa.
Nooca ganacsiga ee diyaaradda Exosonic wuxuu leeyahay 70 kursi, laakiin Air Force One gudaha ayaa dib loo eegay. Waxaa jira kaliya 31 kursi gudaha qolka weyn ee loogu talagalay 20 qof oo lagu daray laba qolal oo loogu talagalay shaqada iyo nasashada.
Fiidiyowga iyo isku xirnaanta internetka oo amni leh ayaa had iyo jeer la damaanad qaadi doonaa, kuraasta gacantu waa sida muuqata nooc ganacsi iyo qalab tayo leh sida maqaar, geed iyo quartz ayaa ka muuqda meel walba.
Marka lagu daro xawaaraha xad dhaafka ah, hawada sare ee loo yaqaan 'Air Force One' waxay dammaanad qaadaysaa xaddiga shan kun oo mayl badeed ama 9,260 kiilomitir. Waxaa la saadaalinayaa inay timaado 2030.
CDC waxay siisay farriin deg deg ah qof kasta oo Mareykan ah ...